Tooftaan Diinnii ittiin WBO adamsu kan duraa irraa adda ta'ee jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTooftaan Diinnii ittiin WBO adamsu kan duraa irraa adda ta’ee jira.
#WBO Gaachana Sabaafi Deggertoota WBO Mara biraannaa ga’i!!
-Tooftaan Diinnii ittiin WBO adamsu kan duraa irraa adda ta‘ee jira. RIB isa duri guyyaan bosona keessa deemtee WBO barbaaddu laaffisuun tooftaa haaraa baastee bakka garaa garaati WBO Midhuuf yaalii gootee jirti. Waanti kaleessa Aanaa Lataa Sibuu Warra Jirruutti ta’e fkn guddaadha.
~ RIB Mandhee WBOf waa deddeebisan guyyaafi halkan karaa Kaabinootaafi Milishoota isaa hordofti.
~ Guyyaa Mandheen bosona dhaqee WBO quunnamee galu gaafa adda baastu, halkan Mana Namicha Mandhee sanaa deemtee balbala itti Cabsitee guyyaa WBOf galaa geessitee yeroo akkasii galte jettee karaa inni irra deemeefi waaninni hojjete fakkeenya waliin kennitiif. Sanaa booda ka’i lafa battala isaanii nu geessi jettee durqiin halkaniin osoo namni hin argiin bakka battala WBO deemti.
~ Halkan sana haxxee itti hiitee, Marsitee bulti gaafa lafti bari’u gaafa WBOn battala gedderachuuf sochii godhan bakka qabattee eegdee dhukaasa itti banti. Wanni kun guyyaa Gaafa Ado/19/2019 Warra Jirruu jalatti ta’eera. Gargaarsa Waaqaan Dhukaasa walitti bananii WBO tooftaa gedderanii Haxxee ishee cabsanii Wareegama kaffalanii ari’an.
~Inni Olaanaan kan dagachuu hin qabne halkan Sochii godhanii bakka shakkan Haxxee hidhanii bulu. Kanaaf Waardiyaan WBO baayee kan durirra eggannoo cimsuufi Odeeffannoo hordofuun gaarii ta’a.
~ Qeerroofi Ummata Oromoof toofta uumuun halkaniifi guyyaa Sochii RIB hordofuun WBOf odeeffannoo quubsaa kennuun dirqama keessan ba’a. Keessattuu hirriba halkanii dhiisuun yeroottii kanatti baayee murteessaadha.
~ Milishootafi namoota Waajjira Nageenyaa keessa kan hojjetan bakka dhaloota isaanii ykn ganda isaanii keessa WBOn qusachuu hin qabu. Odeeffannoo firaafi hadha manaa saa irraa fudhatee RIB fudhatee WBOtti fida. Kanas Jabinaan eeguu qabna.
~ Maatii Milishaa, Ilmaan Milishootaa, Walumaa galatti Firotan Kaabineefi Milishootaa kan taatan Odeeffannoo Firakooti, abbaakooti, Obboleessakooti jettanii odeeffannoo WBO itti hin kenninaa.
#Jaalalaafi Abdiin Nuti WBO irraa qabnu Kan durii caaluu qaba.
Opdon diina Uummata oromooti yeroo jennu lafumaa kannee miti.Addiisuu Araggaaw mallas diina Uummata oromootiin goota kooti jedhee faarsa kunoo! Suuraan kan Abiyyimmoo isa yeroo inni dhaabata basaasaa biyyoolessaa hundeessee achumanillee keessa hojjechaa turedha.
Colonel Mengistu Hailemariam’s advisers second chance under Dr. Abiy is failing again https://t.co/PnYHlXs6lM pic.twitter.com/SaOaAU8tbB
— Kichuu (@kichuu24) July 17, 2019
አቶ አንዳርጋቸው እንደሚለው ይህ መንግስት(ODP-OPDO) ከመጀመሪያ ጀምሮ እየተመራ ያለው በአርበኞች-ግ7/ኢዜማ የፖለቲካ ፕሮግራም (በእሱ እባባል ፍኖተ-ካርታ) ነው!! https://t.co/X5S1m86vym pic.twitter.com/kmmc31FzPs
— Kichuu (@kichuu24) July 16, 2019